प्रधानमन्त्री ओली हटाउनेबारे सोच्नुपनि अपराध हो, पाप लाग्छ: राज्यमन्त्री दुगड - हिमाल दैनिक
प्रधानमन्त्री ओली हटाउनेबारे सोच्नुपनि अपराध हो, पाप लाग्छ: राज्यमन्त्री दुगड
१४ असार २०७७, आईतवार २१:३९
राज्यमन्त्री दुगडले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताको हितमा एउटा संकल्प र अठोटका साथ काम गरिरहेको जिकिर गरे । ‘वर्तमान सरकार पारदर्शी छ, केपी ओलीजस्तो एउटा भिजनरी लिडर देशको प्रधानमन्त्री पाउनु देश र हामी नेपाली जनता सबैको लागि सौभाग्यको कुरा हो ।’ दुगडले भने । उनले सरकारको विरोध गर्ने वा आलोचना गर्नेहरुले जे कुरामा पनि आलोचना गर्ने गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हेर्नुहोस, आलोचनामात्रै गर्ने काम भएकाहरुसँग त सरकारको बारेमा आलोचना गर्न फेहरिस्त नै हुन्छन् । सरकारले शतप्रतिशत सन्तुष्ट गर्न सक्दैन् । तर, देश र जनताको हितमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।’
मन्त्री दुगडले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बदल्ने काम गर्न नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री बदल्ने काम दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा मन्त्रीहरु बदलेर देश बन्दैन् । प्रधानमन्त्री हट्दैमा देश बन्छ भनेर कसले ग्यारेन्टी लिन्छ ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले क्वालिटीको काम गर्नुभएको छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छु भन्नुभएको छ । प्रमाणसहित आए उहाँले कारबाही गर्छु भनेर सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘उहाँको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले स्मुथ्ली काम गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा सानातिना कुरामा अल्झिनु हुँदैन् ।’
वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीमा देश बनाउने संकल्प रहेको र सोहीअनुसार आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिररहेको पनि उनको भनाई छ । ‘नेपालको नयाँ नक्सा संसदबाट सर्वसम्मतीमा पारित गराउने कुरा हेर्नुहोस, उहाँले पूर्ण बहुमतले पारित गराउनुभयो, सबै दलको यसमा समर्थन रह्यो, यो आफैंमा ऐतिहासिक काम हो, उहाँ कसैसँगपनि डराउनुभएन, उहाँले दृढ संकल्प लिनुभयो ।’–उनले भने ।
नेपालले संसदबाट नयाँ नक्सा पारित गरेपछि भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध टुटाउनेबारे भ्रामक कुरा बाहिर आएको पनि उनले टिप्पणी गरे । दुगडले भने,‘भारतले कहिल्यैपनि त्यस्तो काम गर्दैन् । नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । सानो–सानो कुराले दुई देशबीचको सम्बन्ध टुट्दैन् । नाकाबन्दी लगाउँछ भन्नु भ्रामक कुरा हो ।’ नेपाल र भारतबीचको द्धिपक्षीय सम्बन्धमा जनस्तरमा द्धेष उत्पन्न गराउने काम कतैबाट पनि हुन नहुने उनको आग्रह छ । उनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बिगार्ने काम गर्न नहुने जिकिर गरे । दुई देशबीच धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समानता भएकोले द्धिपक्षीय सम्बन्धमा खलल वा आँच पुर्याउने काम गर्न नहुनेतर्फ उनले सचेत गराए ।
सरकारप्रति जनताले असन्तुष्टि पोख्नु स्वभाविक भएको उनको तर्क छ । वर्तमान सरकार गठन भएको अढाई वर्ष पूरा हुन लागेको र सरकारप्रति जनताको ठूला–ठूला आशा र अपेक्षा रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने,‘जनताले नेकपालई झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिएका छन् । सरकारप्रति जनताको हाई एक्सपेक्टेशन हुनु स्वभाविक हो ।
इतिहासमै पहिलोपटक नेकपालाई यो अवसर प्राप्त भएको छ । बलियो सरकारसँग जनताको अपेक्षा र आशा हुनु स्वाभाविक हो ।’ उनले सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट सकेको काम गरिरहेको सुनाए । उनले भने,‘आजको भोलि नै समृद्धि हाँसिल गर्न सकिँदैन् । सरकारसँग जादुको छडी त छैन । तर, सरकारले राम्रो काम गरिराखेको छ । स्टेप–बाई–स्टेप सरकारले देश र जनतासामू आएका चूनौति र समस्याहरु समाधान गर्दै गैरहेको छ । केहीको त काम मात्रै सरकारको आलोचना गर्ने छ ।’
उनले सरकारको कामबाट के उद्योगी तथा व्यवसायीहरु खुशी छैनन् त ? भन्दै उल्टै प्रश्न गरे । उनले भने,‘हिजोजस्तो परम्परागत शैलीमा काम गर्ने कुरा परिवर्तन भएको छ । कालाबजारी र मूल्यवृद्धि रोकिएका छन् । सरकारले चूनौतिका बावजदुतपनि सकारात्मक काम गरिरहेको छ ।’ सरकारले कोरोना महामारीको संकटको बावजुद बजेटपनि सन्तोषजनक ल्याएको उनले दाबी गरे ।
उनले भने,‘बजेटले विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिएको छ । उद्योग, धन्दा, कलकारखाना जारी छन् । बजेटमा देश समृद्ध बनाउने परिकल्पना छ ।’ तर, केहीले बजेटमाथि पनि दोषारोपण गरिरहेको उनको गुनासो छ । ‘जस्तै राम्रो बजेट आएपनि ठीक छैन भन्ने प्रवृत्ति छ, यो गलत हो । ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्नुपर्छ ।’ उनले थपे ।
उनले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने जनमत नै आफूले पाएको सुनाए । उनले केही कुरा संशोधन गरेर भएपनि यो पारित हुने आफ्नो विश्वास व्यक्त गरे । ‘यो नेपालको विकास र समृद्धिको लागि उचित प्रोजेक्ट हो । स्थायी कमिटीको बैठकपछि प्रधानमन्त्री निर्णायक मोडमा पुग्नुहुन्छ । उहाँले यसबारेमा संयमततापूर्वक निर्णय लिनुहुनेछ ।’ दुगडले भने ।
Prevपछिल्लोचौधौँँ महाधिवेशन फागुन ७ मै गर्न कार्यतालिकामा के गर्नु पर्छ गरौँः देउवा
अघिल्लोपाल्पामा सलह भगाउन सकसNext